Ajaaniib U Codeeysey Xisbiga cunsuriga SD | Somaliska
War-bixinta la xiriirta in soo-galooti u dhashay carriga Bariga Dhexe ee degmada Södertälje u codeeyeen xisbiga Sverigedemokrat-ka (SD) ayaa dhalisay feejignaan.
Su’aasha is-weeydiinta lihi waxay tahay sideey ajaaniib ugu codeeyeen xisbiga xag-jir ah ee hor boodaya siyaasad lid ku ah soo-galootiga?
Yilmaz Kerimo, oo ka tirsan xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ee xaafadda Södertälje xubnihiisa u sharaxan baarlamanka ayaa qaba in xisbiga SD uu kula kacay fal qiyaamo dadyoowgaa, isagoona uu xisbigu isticmaalay dareenkooda iyo fikirrada aan wanaagsanayn ee qaarkood ka qabaan bulsho kale:
- Nasiibdarro, ma hubo tiradoodu inta ey le’eg tahay hase yeeshee aniga laftayda waan maqlay in qaar ka mid ah bulshada asiiri-ga/siiriyaan-ka iyo ciraaqiyiin ey u codeeyeen xisbiga SD.
Xisbiga SD wuxuu ku doorasho galay inuu muslimiinta ka soo horjeedo. Nasiib darro waxaa jira dadyoow dhibaatooyin ey kala soo gudboonaadeen dalalkoodii hooyo. Waana sababta keliya oo ey u doorteen iney u codeeyaan xisbiga SD.
Inkastooy middaasi xaqiiqda ka fog tahay, waayo xisbiga SD wuxuu ka soo hor-jeedaa dhammaan ajaaniibta, cid walba oo aan asal ahaan iswiidhish ahayn.
Shakhsiyaadka u codeeyey SD waa kuwo ey dhibaatooyin kala soo gudboonaadeen waddammadoodii iyada oo ey ugu wacneeyd diintooda.
Mar uu Yilmaz Kerimo ka jawaabayay su’aasha la xiriirta iney jiraan iska hor imaad u dhaxeeya masiixiyiinta Asiiriyiin-ta/siiriyaan-ka iyo muslimiinta wuxuu yiri:
- Waxaa labada garabba ee muslimiinta iyo masiixigaba ku jira qaar xag-jir ah. Waana mid loo baahan yahay in xisbiyadayada aaminsan mabda’a Dimoqoraadiga ey ka shaqeeyaan sidii loo baabai’in lahaa cuqdadaha ey bulshooyinku kala qabaan.
War-bixinta la xiriirta in soo-galooti u dhashay carriga Bariga Dhexe ee degmada Södertälje u codeeyeen xisbiga Sverigedemokrat-ka (SD) ayaa dhalisay feejignaan.Su’aasha is-weeydiinta lihi waxay tahay sideey ajaaniib ugu codeeyeen xisbiga xag-jir ah ee hor boodaya siyaasad lid ku ah soo-galootiga?Yilmaz Kerimo, oo ka tirsan xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ee xaafadda Södertälje xubnihiisa u sharaxan baarlamanka ayaa qaba in xisbiga SD uu kula kacay fal qiyaamo dadyoowgaa, isagoona uu xisbigu isticmaalay dareenkooda iyo fikirrada aan wanaagsanayn ee qaarkood ka qabaan bulsho kale:- Nasiibdarro, ma hubo tiradoodu inta ey le’eg tahay hase yeeshee aniga laftayda waan maqlay in qaar ka mid ah bulshada asiiri-ga/siiriyaan-ka iyo ciraaqiyiin ey u codeeyeen xisbiga SD.Xisbiga SD wuxuu ku doorasho galay inuu muslimiinta ka soo horjeedo. Nasiib darro waxaa jira dadyoow dhibaatooyin ey kala soo gudboonaadeen dalalkoodii hooyo. Waana sababta keliya oo ey u doorteen iney u codeeyaan xisbiga SD. Inkastooy middaasi xaqiiqda ka fog tahay, waayo xisbiga SD wuxuu ka soo hor-jeedaa dhammaan ajaaniibta, cid walba oo aan asal ahaan iswiidhish ahayn.Shakhsiyaadka u codeeyey SD waa kuwo ey dhibaatooyin kala soo gudboonaadeen waddammadoodii iyada oo ey ugu wacneeyd diintooda. Mar uu Yilmaz Kerimo ka jawaabayay su’aasha la xiriirta iney jiraan iska hor imaad u dhaxeeya masiixiyiintaAsiiriyiin-ta/siiriyaan-ka iyo muslimiinta wuxuu yiri: - Waxaa labada garabba ee muslimiinta iyo masiixigaba ku jira qaar xag-jir ah. Waana mid loo baahan yahay in xisbiyadayada aaminsan mabda’a Dimoqoraadiga ey ka shaqeeyaan sidii loo baabai’in lahaa cuqdadaha ey bulshooyinku kala qabaan. Sveriges Radio
– Nasiibdarro, ma hubo tiradoodu inta ey le’eg tahay hase yeeshee aniga laftayda waan maqlay in qaar ka mid ah bulshada asiiri-ga/siiriyaan-ka iyo ciraaqiyiin ey u codeeyeen xisbiga SD.
– Waxaa labada garabba ee muslimiinta iyo masiixigaba ku jira qaar xag-jir ah. Waana mid loo baahan yahay in xisbiyadayada aaminsan mabda’a Dimoqoraadiga ey ka shaqeeyaan sidii loo baabai’in lahaa cuqdadaha ey bulshooyinku kala qabaan.
War-bixinta la xiriirta in soo-galooti u dhashay carriga Bariga Dhexe ee degmada Södertälje u codeeyeen xisbiga Sverigedemokrat-ka (SD) ayaa dhalisay feejignaan.Su’aasha is-weeydiinta lihi waxay tahay sideey ajaaniib ugu codeeyeen xisbiga xag-jir ah ee hor boodaya siyaasad lid ku ah soo-galootiga?Yilmaz Kerimo, oo ka tirsan xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ee xaafadda Södertälje xubnihiisa u sharaxan baarlamanka ayaa qaba in xisbiga SD uu kula kacay fal qiyaamo dadyoowgaa, isagoona uu xisbigu isticmaalay dareenkooda iyo fikirrada aan wanaagsanayn ee qaarkood ka qabaan bulsho kale:- Nasiibdarro, ma hubo tiradoodu inta ey le’eg tahay hase yeeshee aniga laftayda waan maqlay in qaar ka mid ah bulshada asiiri-ga/siiriyaan-ka iyo ciraaqiyiin ey u codeeyeen xisbiga SD.Xisbiga SD wuxuu ku doorasho galay inuu muslimiinta ka soo horjeedo.
Nasiib darro waxaa jira dadyoow dhibaatooyin ey kala soo gudboonaadeen dalalkoodii hooyo. Waana sababta keliya oo ey u doorteen iney u codeeyaan xisbiga SD.
Inkastooy middaasi xaqiiqda ka fog tahay, waayo xisbiga SD wuxuu ka soo hor-jeedaa dhammaan ajaaniibta, cid walba oo aan asal ahaan iswiidhish ahayn.Shakhsiyaadka u codeeyey SD waa kuwo ey dhibaatooyin kala soo gudboonaadeen waddammadoodii iyada oo ey ugu wacneeyd diintooda.
Mar uu Yilmaz Kerimo ka jawaabayay su’aasha la xiriirta iney jiraan iska hor imaad u dhaxeeya masiixiyiintaAsiiriyiin-ta/siiriyaan-ka iyo muslimiinta wuxuu yiri: – Waxaa labada garabba ee muslimiinta iyo masiixigaba ku jira qaar xag-jir ah.
Waana mid loo baahan yahay in xisbiyadayada aaminsan mabda’a Dimoqoraadiga ey ka shaqeeyaan sidii loo baabai’in lahaa cuqdadaha ey bulshooyinku kala qabaan.